Uvalo Wall Izixhobo Factory | Kwichina Idayaphragm Wall Equipment Manufacturers, Abaxhasi
TG60 izixhobo uvalo udonga
I-TG60 yokuthintela udonga olungaphantsi komhlaba ingasetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwenkxaso yemingxunya yesiseko, indlela kaloliwe, uthintelo lwe-dyke seepage, i-dock cofferdam, indawo yangaphantsi yolwakhiwo lwezixhobo zasezidolophini, njl.
I-TG50 I-Diaphragm Wall Izixhobo
I-TG50 uvalo lweendonga zizinto ezingaphantsi komhlaba ezakhiweyo ikakhulu ezisetyenziselwa ukugcina iinkqubo kunye neendonga ezisisigxina.
Uthotho lwethu lwe-TG lothotho lwe-diaphragm eludongeni lubambe iindawo ezihambahamba kakuhle, idama elichasene nomsele, inkxaso yokomba, i-dock cofferdam kunye ne-element element, kwaye kufanelekile nolwakhiwo lweemfumba zesikwere. Ngomnye woomatshini abasebenza ngokukuko nabasebenza kwimarike.
I-TG70 I-Diaphragm Wall Izixhobo
SINOVO International i phambili Chinese oomatshini zokwakha exporter.Since inkampani yethu yasekwa, siyaqhubeka ukwazisa amashishini Chinese oomatshini zokwakha kunye neemveliso zabo kwiimarike zamazwe ngamazwe. Asenzi nje abathengi bamanye amazwe ukuba bazi kwaye baxhase iimveliso zethu, kodwa ngokuthe ngcembe bakhe ubuhlobo kunye nabathengi boomatshini bokwakha kwihlabathi liphela.